အထွက် B2B စျေးကွက်ရှာဖွေရေးမဟာဗျူဟာနှင့်ဘလော့ဂ်လုပ်ခြင်း
B2B ဘလော့ရေးခြင်း - Webtrends Engage 2010
တနင်္ဂနွေ, ဖေဖော်ဝါရီလ 14, 2010 တနင်္ဂနွေ, အောက်တိုဘာလ 19, 2014 Douglas Karr
မှာကြီးစွာသောရှေးရှေး ဝက်ဘ်ဆိုက်များ မှာစပီ၏ဗီဒီယိုတင်ခဲ့သည် Webtrends 2010 ခုနှစ်ဆွဲဆောင်။ ဒီနေရာမှာငါလုပ်ခဲ့တဲ့ 10 မိနစ် Sprint B2B ဘလော့ဂ်ရေးခြင်းနှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးမဟာဗျူဟာများ.
ပြုပြင်ထားသောတင်ဆက်မှုနှင့်မှတ်စုများသည်ကျွန်ုပ်၌ရှိသည် စီးပွားရေးအတွက် blogging ပြီးခဲ့သည့်အပတ်က post ။ စာရင်းသွင်းရန်သေချာစေပါ ဆန်ဖရန်စစ္စကိုတွင် Webtrends ပါ ၀ င်သည်.
Tags: b2b ဘလော့ဂ်ဘလော့ဂ်CTA ခလုတ်များdouglas karrFacebook ကတင်ဆက်မှု။Webtrends ထိတွေ့ဆက်ဆံ